2011-06-19 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေး ​မင်း​လွင်​မိုးး​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ . ​ကျွန်​တော်​ကို cafesuite 3.58.1 ​ရဲ့ serial ​ဖြစ်​ဖြစ် crack ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ရှာ​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော်​လည်း ​ရှာ​နေ​တာ ​တော်​တော်​လေး​ကို ​မူး​နေ​လို့ ..
​ကို​မင်း​လွင်​မိုး​ရေ version 3.58 ​တော့ ​မ​တွေ့​လို့ ​တွေ့​တဲ့ 3.49L version ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် crack ​လဲ ​အ​ထဲ​မှာ ​ပါ​ထား​ပြီး​သား​ပါ .
CafeStation Operating System Windows 95/98/Me,2000/XP/2003/Vista/Windows7(32-bit and 64-bit)
Processor Anything that can run Windows Memory Anything that can run Windows Disk Space 100 MB
Client software Operating System Windows 95/98/Me,2000/XP/2003/Vista/Windows7(32-bit and 64-bit)
Processor Anything that can run Windows Memory Anything that can run Windows Disk Space 20 MB
Download >> ifile.it | Mediafire | zshare | ziddu